Baaritaanka Cassini: astaamaha, ujeeddada iyo daahfurnaanta | Saadaasha Shabakadda
Bani'aadamku wuxuu ku jiraa hal-abuurkiisa inuu ogaado koonkan, wuxuu adeegsaday aalado farsamo oo fara badan oo u oggolaaday inuu wax barto oo soo saaro tiro aad u badan oo macluumaad aad u faa'iido badan leh. Ku Baaritaanka Cassini waxay ku jirtay safar tacabirka hawada muddo ka badan 20 sano waxayna noqotay wehelka Saturn. Si kastaba ha noqotee, dhawr sano ka hor wuu naga tagay laakiin wuxuu la yimid sawirro iyo aqoon aan caadi ahayn.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan astaamaha, safarka muhiimka ah ee baaritaanka Cassini.
2 Soo helitaanno waaweyn oo laga helay baaritaanka Cassini
3 Baaritaanka Cassini iyo meelaha lagu noolaan karo
Waxaa la bilaabay 1997-dii mana gaarin Saturn ilaa 2004. Intii lagu guda jiray safarkan 7-da sano ah waxay ahayd inay soo marto dhibaatooyin qaar. Wejigii ugu dambeeyay wuxuu soo billowday Abriil 22, 2017 iyo wuxuu mas'uul ka ahaa marinka aagga u dhexeeya siddooyinkiisa iyo meeraha. Ugu dambeyntii waxaa lagu burburiyey jawiga Saturn ka dib sannado badan oo adeeg ah.
Haddii aan tirino 7-da dhaawac ee ay qaadatay in la gaaro Saturn, waxaan ku darnaa 13 sano oo qiiq ah, marka waxay awood u yeelatay in ay qabato howlo aad u yar. Waxaa laga joogaa 13 sano wareegaya meeraha ay suurta gashay in laga soo saaro macluumaad aad u tiro badan oo ku saabsan dayax gacmeedyada waaweyn. Horeba 10 sano kadib markii uu wareegi jiray, waxay bixisay xog in kabadan 3.500 milyan oo kilomitir ku wareegtay meeraha, qiyaastii 350.000 oo sawir iyo in kabadan 500 GB xogta saynisyahannada.
Si kastaba ha noqotee, baaritaanka Cassini ma uusan sameyn safarkan oo dhan kaligiis. Lamaanihiisa wuxuu ahaa Huygens waxaana soo saaray wakaaladda hawada sare ee Yurub (ESA). Saaxiibkan ayaa kala go'ay kadib markii uu caga dhigtay Titan Janaayo 14, 2005. Howlgalka baaritaanka Cassini waa la kordhiyay ilaa 2008, laakiin xaaladdeeda aadka u wanaagsan awgood waxaa lagu kordhiyay howlgalada ilaa sanadkaan. In kasta oo ay adeegsato culeyska Titan si ay u sameyso isbeddellada wareegga, waxay u isticmaashaa shidaalkeeda inay ku sameyso dhaqdhaqaaqyo gaar ah. Sanado badan ka dib, shidaalku wuxuu ficil ahaan ugu sii jiray keyd aad u yar oo NASA waxay doorbiday inay baabi'iso oo ay ka fogaato inuu ku soo dhaco mid ka mid ah dayaxyada wasakheeya meelaha qiimaha cilmiga gaarka ah leh.
Waxaan wasakheeynaa meeraheena iyo hareeraheeda si aan ugu tagno Saturn si aan u wasakheeyno dayaxyadeeda.
Soo helitaanno waaweyn oo laga helay baaritaanka Cassini
Aynu aragno waxa ugu weyn ee daahfurka ah ee baaritaanka Cassini sameeyay. Ku-biirintaas Saturn, wuxuu ahaa sahamiyayaal weyn oo waxay soo saartay ilaa 7 dayax oo cusub oo meeraha ah waxayna xaqiijisay in Enceladus ay daboosho badweyn caalami ah ku hoos qarsoon lakabka barafka dibedda. Hawlgalkii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu halista badan tan iyo markii ay gashay wareegga cirifka ah ee cirifka ah ee barta ugu dhow ee meeraha ay ku dhowdahay 8.000 kilomitir. Hawlgalkan, waxay ka samaysay 22 wareeg oo si dhammaystiran loo qorsheeyay maaddaama xawaarihiisu u dhow yahay 34 kiiloomitir ilbiriqsi kasta waxay dhex mari kartaa inta u dhexeysa fargallada iyo meeraha iyadoo u dhexeysa qiyaastii 2.000 kiilomitir.
Wareeggeedii ugu dambeeyay waxaa caawiyay cufnaanta dayaxa Saturn. Baadhitaanka waa in la dhigaa meeriskiisii ​​ugu dambeeyay kaas oo ku yaalay barta ugu dhow meeraha iyada oo keliya qiyaastii 1.000 km. Dhexdeeda wuxuu awood u yeeshay inuu soo bandhigo xog ka fiican taas oo u oggolaatay inuu falanqeeyo dhismaha gudaha ee meeraha iyo siddooyinkiisa. Xaqiijinta 5%, waxaa suurtagal noqotay in la xisaabiyo tirada lana sawiro daruuraha iyo jawiga. Ugu dambeyntiina, Sebtember 11, 2017, waxay billowday duulimaadkeedii ugu dambeeyay si ay u soo afjarto kala-daadashada jawiga Saturn.
Baaritaanka Cassini iyo meelaha lagu noolaan karo
Kahor hawlgalku intuusan bilaaban, ma caddayn in isku-dhafka la og yahay ee walxaha muhiimka u ah nolosha uu ka jiray meel qorraxda ka baxsan: biyo qabow, biyo dareere ah, kiimikooyin aasaasi ah, iyo tamar, qorraxda, ama falcelin kiimikaad. Tan iyo markii Cassini yimid Saturn, ayaa muujisay inay suurtagal tahay in la helo adduun lagu noolaan karo oo leh badweyn.
Enceladus, in kasta oo ay yartahay cabirkeeda, waxaa la ogaaday in ay leedahay dhaqdhaqaaqyo juquraafiyeed oo xoog badan iyo keyd biyo ah oo u dhow cirifka koonfureed, maxaa yeelay waa biyo dareere caalami ah. Baddu waxay ka kooban tahay cusbo iyo moleculeello dabiici ah oo fudud, baddu waxay u sii deysaa uumi-biyood iyo jel iyada oo loo marayo geysarka dillaaca dushiisa. Jiritaanka badaani waxay Enceladus ka dhigeysaa mid ka mid ah meelaha ugu rajada badan nidaamka qorraxda si nolol looga helo.
Sanadihii la soo dhaafay, baaritaanka Cassini wuxuu sidoo kale xaliyay mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee mala awaalka ah: maxay Enceladus u tahay jidhka ugu iftiinka badan qorraxda. Tani waa sababta oo ah waxay ahayd jir baraf ah.
Titan sidoo kale waa musharax xoogan oo raadinaya nolol. Baadhitaankii Huygens ee waday Cassini wuxuu ku soo degay dusha sare ee dayax gacmeedka wuxuuna helay cadeymo muujinaya badweyn ka hooseysa barafkeeda, oo laga yaabo inay ka kooban tahay biyo iyo ammonia, jawigana waxaa ka buuxa moleculeyaal prebiotic ah. Wuxuu arkay inay ka kooban tahay nidaam biyo-biyood dhammaystiran, oo leh wabiyaal, harooyin, iyo badweynno ay ka buuxaan methane iyo ethane.
Iyada oo ku saleysan tusaalaha, saynisyahannadu waxay rumaysan yihiin in badda Titan ay sidoo kale ku jiri karaan hawo-biyoodyo koronto ku shaqeeya, oo tamar siiya nolosha. Sidaa darteed, saynisyahannadu waxay rajaynayaan inay ilaashadaan xaaladihii asalka ahaa ee sahaminta mustaqbalka. Sidaa darteed, waxay sameeyeen baaritaanka Cassini wuxuu "isku dili doonaa" Saturn si looga hortago inay ku dhacdo dayaxdan oo ay wasakhdo.
On Titan, howlgalka ayaa sidoo kale na tusay adduunyo u eg dhulka oo cimilada iyo juquraafiga ay naga caawinayaan inaan fahamno meeraheenna. Si uun, Cassini waa sida mashiinka waqtiga, kaas oo noo furaya daaqad aan ku aragno habsami u socodka jirka ee laga yaabo inuu qaabeeyay horumarka nidaamka qoraxda iyo nidaamyada meerayaasha ee ku xeeran xiddigaha kale.
Dayax gacmeedku wuxuu bixiyay aragti ah nidaamka Saturn. Waxay ka heshay macluumaad ku saabsan halabuurka iyo heerkulka jawiga sare, duufaannada iyo qiiqa raadiyaha ee xoogga leh. Wuxuu arkay hillaaca dhulka dushiisa maalintii iyo habeenki markii ugu horaysay. Waxa kale oo jira fargalkiisa, shaybaar dabiici ah oo lagu barto sameynta meerayaasha, nooc ka mid ah nidaamka qorraxda oo yar-yar.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto baaritaanka Cassini iyo wax ku darsigiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Cassini baadhitaan